Ungabhala kanjani okuqukethwe kwe-SEO enobungane ngami?
Uma uthuthukisa ukutholakala kwe-intanethi yakho, kufanele uqiniseke ukuthi unezinkambiso ezibalulekile ezihlanganisiwe ukuze uqiniseke kahle futhi okuqukethwe kwe-SEO-friendly. Ukubhala okuqukethwe okuhle kulula. Kodwa-ke, udinga ukwenza umsebenzi onzima wokuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuphakanyiswa phezulu yizinjini zokusesha. Ukwenza okuqukethwe kwakho kufakwe kahle futhi kubonakale kubhu yosesho, udinga ukulandela izimiso ezithile zokuthuthukisa okuqukethwe. Akungabazeki, kuthatha isikhathi ukudala okuqukethwe okuhle nokwenziwe nge-SEO-friendly kwewebhusayithi. Kodwa-ke, nge-smart approach kulo msebenzi, uzokwazi ukukhiqiza okuqukethwe kwe-SEO enobungane ngokwakho - credit one debt settlement. Kulesi sihloko, ngizozama ukususa ukungabaza onakho futhi ngikunikeze ngamasu wokubhala okuqukethwe smart.
Amathiphu okubhala okuqukethwe kwe-SEO-friendly
Ngaphambi kokuba siqale ukukhuluma ngokubalulekile kokuqukethwe kwe-SEO, ngingathanda ukusho amanye amagama mayelana nezinjongo ze-SEO ukuvumela uyaqonda injongo yokuhlelwa kokuqukethwe okulungiselelwe. Umgomo oyinhloko wokwenza ngcono injini yokusesha ukuqinisekisa ukuthi izindawo zakho zokuqukethwe ku-TOP ye-Google SERP. I-bots yokusesha kufanele iqonde ukuthi yini okuqukethwe kwakho futhi iwubonise kumbuzo womsebenzisi ofanele.
Ukuthuthukisa izinga lakho lokusesha injini, kudingeka ulandele ezinye izinyathelo ezibalulekile:
unikeza ngamasevisi aphezulu kakhulu kumakhasimende akho;
kuthuthukise igunya lakho lesizinda;
ukwenza ibhizinisi lakho lihlonishwe.
Kunezinhlobo ezimbili zezindlela zokusebenzisa injini yokusesha ongayisebenzisa ukuze ukwandise isayithi lakho ngokusho kwamazinga okucinga.
Ungenza i-SEO yakho ngendlu noma uyikhiphe ngaphandle. In-house SEO ingabizi futhi ihilela abantu abazi kahle iwebhusayithi. Noma kunjalo, ukuthuthukisa i-rankings yakho yewebhusayithi ngokwakho, kufanele uqaphele wonke amasu okusebenza okubalulekile kanye nezinhlawulo zezimakethe zedijithali. Inqubo yokusebenza ngaphakathi endlini ingaba isikhathi esiningi futhi ngeshwa ingenasithelo. Ngenkathi i-SEO ekhishwe ngaphandle iqhutshwa ochwepheshe abafakazelwe kule nsimu. Bayazi zonke izici ezibalulekile zokusebenza futhi bangakunika okuqukethwe okungcono kakhulu njengoba bazi ukuthi yiziphi izinjini zokulinda ezisuka kusayithi lakho. Ngokubambisana nabachwepheshe be-SEO besithathu, uzokwazi ukuthola imiphumela emihle ezinyangeni ezingu-3-6.
Namuhla, ngizozama ukukufundisa ukuthi ungakha kanjani okuqukethwe ne-SEO-friendly ngokwakho bese ulondoloza imali yakho kumasevisi wokukopisha we-SEO. Okuqukethwe okulungiselelwe kahle akudingeki kube nzima noma kudle isikhathi, uma nje uqonda ukuthi ukusebenza kahle kwekhasi kungasebenza kanjani eceleni kokuqukethwe kwakho. Nakhu ukuthi ubhale kanjani okuqukethwe kwe-SEO-friendly ukuthi kokubili ukusesha bots kanye namakhasimende akho angase athokoze.
ucwaningo lwegama elingukhiye yingxenye ebaluleke kunazo zonke emkhankasweni we-SEO ophumelelayo umugqa we-SEO kokuqukethwe okunobungane. Amagama angukhiye abalulekile futhi ahlosiwe anquma isikhundla sakho sewebhu. Ukwenza uphenyo lwegama elingukhiye elungile, udinga ukucabangela ukuthi yiziphi imibuzo zokusesha amakhasimende akho angase azisebenzise ukuthola ikhasi lakho lewebhu. Kufanele uhlakulele i-knack yokuqaphela lokho abasebenzisi abakulindele kusayithi lakho. Ukuze ube yi-TOP emiphumeleni yosesho, udinga ukhethe amagama omseshi omude omncintiswano omncane. Ukuze wenze lula ukucwaninga ngegama elingukhiye, ungasebenzisa amathuluzi anjalo azenzekelayo njenge-Semalt Auto SEO, ithuluzi elingukhiye noma i-Google Keyword Planner. Lawa mathuluzi azokusiza ukuthi ungenzi uhlu lwamagama asetshenzisiwe kuphela kodwa futhi akunike ukuqonda ukuthi yiziphi amagama angukhiye aphakanyisiwe abadlali bakho.
Ukukhiqiza kokuqukethwe okuyingqayizivele
Yiqiniso, asikho isizathu sokwenza okuqukethwe okusha uma kungabonakali ngokwanele ukuphuma. Ngisho noma uthatha umqondo kusuka komunye umthombo, udinga ukuhlinzeka ngombono oyingqayizivele ozokwengeza inani kwisihloko esithile. Ngokukopisha-okuqukethwe kokunamathisela, ubeka engozini ukuthola izigwegwe kusuka ku-Google futhi ungalahlekelwa izikhundla zakho zokubala. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi abaye babona okuqukethwe okungewona okwehlukile kwenye imithombo, ngeke bathathe isizinda sakho njengento efanele futhi sinokwethenjelwa. Qinisekisa ukuthi okuqukethwe kwakho kuyingqayizivele, kuhambisana futhi kusesikhathini ukuze uhlanganyele abasebenzisi futhi ubaphendule ngamakhasimende akho. Ungabheka okuqukethwe kwakho kokuqala ngamathuluzi amaningi atholakalayo afana ne-Copyscape noma i-Plagiarism Checker.
Ama-Titles nokwenza kahle
Isihloko sakho sewebhusayithi yinto yokuqala abasebenzisi abangayibona lapho behlola. Isebenza njengombukiso wokuqukethwe kwesayithi lakho. Isihloko sakho kufanele sibe ngokucacile, sibambe futhi sibe ne-SEO-friendly. Qinisekisa ukuthi ufaka amagama angukhiye ahlosiwe futhi aphakeme kakhulu ezihlokweni zakho. Sebenzisa amagama amandla futhi ugweme ukubuyiswa kabusha ukuze udale isihloko esicacile nesihilelekile. Udinga ukufaka ulwazi olubaluleke kakhulu mayelana nebhizinisi lakho ngezinhlamvu ezingu-60. Yingakho ngineluleka ukuba ucabangele izinhlobo eziningi ngangokunokwenzeka.
Ngaphezu kwalokho, qaphela amathegi we-SEO futhi uqinisekise ukuthi usebenzise ithegi ye-H1 kuzo zonke iziqu ngaphakathi kokuqukethwe. Kuyisinqumo esihle sokuhlukanisa izigaba ezithile ngemibhalo engezansi ukwenza okuqukethwe kwakho kube lula ukufunda nokupheqa. Udinga ukusebenzisa amathegi we-H2 kuwo wonke ama-subtitles wakho. Qiniseka ukuthi ufaka amagama angukhiye afanele ngezihloko nemibhalo engezansi ukuze uvumele ibhu yokusesha ngokushesha ihambise okuqukethwe kwakho ngokushesha.
Ukunikeza i-push kokuqukethwe kwakho kwe-SEO-friendly, udinga ukuba nama-URL afanele. Faka esikhundleni i-URL yonke engalungile futhi engafundiwe ngokuqondile nangokulungisiwe. Ama-URL angenawo umqondo awasebenzisi lutho kubasebenzisi noma i-Google bots. I-URL ye-SEO-friendly yilawo enegama elingukhiye kuyo. Ngokwenza ngcono ama-URL akho, uphakamisa ithuba lakho lokuxoshwa ngabashayeli be-crawlers.
Incazelo ye-meta ingumbhalo ochaza iwebhusayithi yakho futhi iboniswe ngaphansi i-URL yakho yesayithi ekusesheni. Kuyinto yokuqala abasebenzisi abangafunda ngaphambi kokungena noma yiliphi iwebhusayithi. Incazelo yakho ye-meta kufanele ihlanganyele futhi ihambisane nesayithi lakho lokuqukethwe ukuze abasebenzisi balandele isayithi lakho ngolwazi oluthe xaxa. I-meta-description ehlelwe kahle ingakusiza ukuba ukhulise izinga lokuchofoza-futhi ngisho nokuthuthukisa isikhundla sewebhusayithi.
Izixhumanisi zangaphakathi nezi zangaphandle
Izixhumanisi zangaphakathi zibonisa ukuthi isayithi lakho lihloniphekile ensimini ethile. Ngokusebenzisa izixhumanisi zangaphakathi, udala ukulandelana okunengqondo kusuka kokuthunyelwe okuya kwesinye. Ukungenelela kuzokuthuthukisa ukufaneleka kwesayithi lakho ngokunikeza inani elengeziwe kwezinye izihloko ezithile. Ngaphezu kwalokho, kuzosiza ukucinga ibhu ukuqonda izihloko zakho eziyinhloko.
Izixhumanisi zangaphandle esikhathini saso zikhombisa igunya lakho lesizinda futhi zithuthukisa ukuqaphela umkhiqizo wakho. Izixhumanisi zangaphandle zikhombisa izinjini zokusesha ukuthi okuqukethwe kwakho kuyikhwalithi njengoba yabelana ngabasebenzisi kanye neminye imithombo yewebhu ehlobene niche. Kunengqondo ukubeka izixhumanisi zakho ezizindeni ezihloniphekile nezihlala njalo ngoba lezi zixhumanisi zinokwethenjelwa.